Oggolaansho sharci daganaansho | Information om Sverige
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / Go'aan / Oggolaansho sharci daganaansho
Haddii laguu oggolaaday sharciga deganaansho micnaheedu waa in la aqbalay codsigaaga magan-gelyo. Tani micnaheedu waa in laguu oggolyahay inaad joogto Iswiidhan.
Noocyada kala duwan ee sharciiyada daganaansho
Haddii aad heshay sharci daganaansho oo qaxoonti ahaan ah waxaa sharcigaagu ansax yahay saddex sanno.
Haddii aad heshay sharci daganaansho oo ah baahi magan-gelyo oo kale waxaa sharcigaagu ansax yahay 13 bilood.
Haddii aad heshay oo joogto ah waxaa sharcigaagu shaqaynayaa ilaa iyo inta aad degantahay Iswiidhan.
Haddii aad ka guurto Iswiidhan waxaa Hey'adda Socdaalku ay go'aamin kartaa in lagaala noqdo sharcigaaga daganaansho. Tani micnaheedu waa in adigu aanad sii haysanayn sharciga daganaansho ee Iswiidhan. Haddii aad Hey'adda Socdaalka u sheegto inaad doonaysid inaad haysato sharcigaaga daganaansho waxaad Iswiidhan ka maqnaan kartaa ilaa iyo laba sanno oo haddana aad haysan kartaa sharcigaaga daganaansho ee Iswiidhan.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah.
"Akhri dheeraad ku saabsan waxa dhacaya haddii codsigaaga magan-gelyo la oggolaado oo ku qoran Hey'ada Socdaalka bogeeda. Warbixintan waxaa lagu helayaa Iswiidhish iyo Ingiriisi.
Diiwaan gelinta dadweynaha
Marka aad hesho sharciga deganaansho waa inaad iska diiwaan gelisaa diiwaan gelinta dadweynaha ee Iswiidhan. Tani waxaad ka samaynaysaa mid ka mid ah xafiisyada Hey'ada Canshuuraha. Waa in wakiilkaaga caruurtakuu raacaa Hey'ada Canshuuraha si aad isu diiwaan geliso.
Diiwaan gelinta dadweynaha waxaa lagu diiwaan geliyaa macluumaadka ku saabsan dadka ku nool Iswiidhan, iyo halka ay ku noolyihiin. Marka aad is diiwaan geliso waxaa kale oo aad helaysaa afarta lambar ee ugu dambeeya ee lambarkaaga shakhsiga ah.
Dacwadaadi magan-gelyo way dhamaatay
Hal bil ka dib marka aad hesho sharciga deganaansho waxaa lagaa aarayaa nidaamka Hey'ada Socdaalka. Markaasi ma heli doontid kharashka maalinlaha ah. Kaarkaaga bangiga wuu joogsanayaa oo ma shaqaynayo. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad kala baxdo lacagta ku harsan kaarka bangiga ka hor intaan lagaa saarin Hey'ada Socdaalka.
Marka lagaa saaro nidaamka Hey'ada Socdaalka way dhamaatay dacwadaadi magan-gelyo.
Degmada ayaa leh sii wadaysa inay mas'uul kaa noqoto, ilaa iyo inta aad buuxinayso 18 sano. Degmada ayaa tusaale ahaan hubinaysa inaad haysato meel aad deganaato iyo inaad tegi karto iskoolka.